What is My RBT service?
My RBT ဝန်ဆောင်မှုဆိုသည်မှာဘာလဲ?
MyRBT isatext-based service that delivers available releases of local and international hot ringback tunes twiceaweek. A list of available ringback tunes will be sent to the subscriber withafeatured trivia.
MyRBT သည် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူများထံသို့ လူကြိုက်များသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာသီချင်းများကိုတစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်SMS(စာတို)ပေးပို့ပေးသောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ရရှိနိုင်မည့် ringback tunes (ခေါ်သူနားဆင်) သီချင်းများနှင့်အတူ သီဆိုသူ အဆိုတော်၏ သတင်းအချက်အလက်များကို သုံးစွဲသူထံသို့ ပေးပို့ပေးမည် ဖြစ်သည်။
MyRBT service is open to all MPT subscribers
MyRBT ဝန်ဆောင်မှုကို MPT ဖုန်းသုံးစွဲသူ မည်သူမဆို ရယူနိုင်သည်။
To register to MyRBT service, subscriber must text MR to 8302.This is free of charge.
MyRBT ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန် MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် 8302 သို့ MR ဟုပေးပို့ပါ။စာတိုပေးပို့မှုမှာ အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အချက်အလက်များကို ကျွနိုပ်ရဲ့ဖုန်းသို့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းများနဲ့ ပေးပို့မှာပါလဲ။
Content will be delivered thru SMS.
အချက်အလက်များကို စာတို(SMS) ကနေတစ်ဆင့် ပေးပို့သွားမည် ဖြစ်သည်။
How much will each MYRBT content /trivia cost?
MYRBT သီချင်းတပုဒ်အတွက် ဘယ်လောက်ကျသင့်မလဲ။
Each MYRBT content/trivia received is charged at 68 Ks.
MYRBT ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအတွက် 68ကျပ် ကျသင့်ပါမည်
How much is the registration fee to MPT RBT via 7979?
ဝန်ဆောင်မှုရယူသူအနေနှင့်7979သို့ MPT RBT စာရင်းသွင်းလိုပါကစာရင်းသွင်းခ ဘယ်လောက်ကုန်ကျမည်လဲ
Registration to MPT RBT costs 1,050MMK/month.
MPT RBT စာရင်းသွင်းခအနေနှင့် တစ်လလျှင် ၁၀၅၀ကျပ်သာကျသင့်ပါမည်။
How much will each RBT download cost?
Each RBT song activated is charged at 315 Ks.
RBT သီချင်းတပုဒ်ကိုactivate လုပ်ရန်အတွက် ၃၁၅ ကျပ်ကျသင့်မည်။
How do I getaringback tune?
Ringback Tune တခုရရန်မည်သို့ ဒေါင်းလုပ်ချရမည်လဲ။
The subscriber must first register to MYRBT service by texting MR followed by MRY to 8302. Registration is free. Once subscribed to MYRBT, subscriber will receive the available RBT song code and trivia. Subscribers cannot download the 30s rbt song to their phone.
ဝန်ဆောင်မှုရယူသူသည်၃၀စက္ကန့်RBTသီချင်းများကို၎င်းတို့၏ဖုန်းအတွင်းနားထောင်ရန်ဒေါင်းလုပ်ချ၍ရမည်မဟုတ်ပါ။၎င်းတို့ဖုန်းကိုခေါ်ယူသူများသာအဆိုပါRBTသီချင်းကိုကြားရမည်ဖြစ်သည်။ဝန်ဆောင်မှုရယူသူသည်MYRBTဝန်ဆောင်မှု ကိုစာရင်းသွင်းရန်8302သို့ MRဟုSMS(စာတို)ပထမဦးစွာပေးပို့ရပါမည်။MYRBT ကိုဝန်ဆောင်မှုရယူပြီးသည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုရယူသူသည်ရယူနိုင်မည့်သီချင်းနာမည်များ၊သီချင်းကုတ်နံပါတ်များနှင့်သီချင်းဆိုသူနှင့်သီချင်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်ပါမည်။
How long is the validity of each RBT download?
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော RBT သီချင်းတခုသည် မည်မျှကြာကြာ valid ဖြစ်မည်လဲ။
Each RBT download is valid for 30 days.
RBT သီချင်းတပုဒ်သည် ရက် ၃၀ အထိ valid ဖြစ်ပါသည်
Can I receive content without subscribing to MyRBT?
MyRBT ဝန်ဆောင်မှုကိုမရယူပဲ သီချင်းများကိုရယူနိုင်ပါသလား။
No. User must be subscribed to MyRBT in order receive content.
မရပါ။ အသုံးပြုသူသည် MyRBT သီချင်းများကိုရယူလိုပါကMyRBT ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူရန်လိုပါသည်။
ဘယ်လို ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ်မှာ ၀န်ဆောင်မှုရယူနိုင်ပါသလဲ။
Any mobile phone with text messaging service.
စာတိုပေးပို့တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုစနစ်ပါရှိတဲ့ မည်သည့်ဖုန်းမဆို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
How often will I receive the content for available song code and trivia?
၀န်ဆောင်မှု ရယူထားသူမှာ ၀န်ဆောင်မှုစာတို ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ် လက်ခံရရှိမလဲ။
Subscribers will receiveamaximum of2trivia/content per week - every Wednesday and Friday
ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူသည်တစ်ပတ်လျှင်စာတိုကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့် သောကြာနေ့တိုင်း ၂ ကြိမ် ရရှိမည်။
Can I still subscribe to other Value Added Service (VAS)?
ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူထားသောကြောင့်တစ်ခြားထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှု(Value Added Service,VAS)များကို ရယူနိုင်ပါသေးသလား?
Yes, you can subscribe to other VAS as long as you have enough balance.
ရပါတယ်၊ သင့်ဖုန်းတွင် ဖုန်းငွေလက်ကျန် ရှိ သလောက် တစ်ခြားအပို ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူနိုင်ပါမည်။
၀န်ဆောင်မှု ရယူထားသူမှာ ဖုန်းဘေလ်လက်ကျန်မရှိလျှင် ဘာဖြစ်မလဲ။
၀န်ဆောင်မှု ရယူထားသူမှာ ၀န်ဆောင်မှုကို ၀ယ်ယူသုံးစွဲနေဆဲဖြစ်ပြီး ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ၀န်ဆောင်မှုပေးပို့ခြင်းကို ရရှိမှာဖြစ်သည်။
Do I need to enable my mobile data?
၀န်ဆောင်မှု ရယူထားသူမှာ Mobile Data ဖွင့်ထားရမှာလား။
No. Subscriber can receive My RBT service anytime even mobile data is turned off.
မလိုပါ။ ဝန်ဆောင်မှုရယူသူသည် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှု မရှိ သော်လည်း My RBT ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။
၀န်ဆောင်မှုက်ို မည်သို့ ရပ်ဆိုင်းရမလဲ။
To deactivate MyRBT service, subscriber must text MR OFF to 8302.This is free of charge.
MyRBT ဝန်ဆောင်မှုကို ပယ်ဖျက်ရန် မှာ- ဝန်ဆောင်မှုရယူသူ သည် 8302 သို့ MR OFF ဟု ပေးပို့ ရပါမည်။ ဝန်ဆောင်မှု ပယ်ဖျက်ခြင်းအတွက် အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။